Iindaba -Ukuthelekiswa kokusebenza phakathi kwe-servo motor kunye ne-stepper motor
Njengenkqubo yolawulo lwelokhi evulekileyo, imoto ekuhamba kuyo inolwalamano olubalulekileyo netekhnoloji yolawulo lwedijithali yale mihla. Kule nkqubo yangoku yolawulo lwedijithali lwasekhaya, i-stepper motor isetyenziswa ngokubanzi. Ngokuvela kwenkqubo ye-AC servo yedijithali epheleleyo, i-AC servo motor isetyenziswa ngakumbi nangakumbi kwinkqubo yolawulo lwedijithali. Ukulungelelanisa inkqubela phambili yolawulo lwedijithali, uninzi lweenkqubo zolawulo lwentshukumo zamkela i-stepper motor okanye i-digital AC servo motor epheleleyo njengemoto elawulayo. Nangona ziyafana kwimowudi yolawulo (ukubetha koololiwe kunye nomqondiso wesalathiso), zahluke kakhulu ekusebenzeni nasekusebenziseni. Ukusebenza kwezi zimbini kuthelekiswa.
Okokuqala, ulawulo oluchanekileyo oluchanekileyo
I-Angle yokunyathela yamanqanaba amabini e-motor ehambisayo ye-hybrid ngokubanzi yi-1.8 ° kunye ne-0.9 °, kunye ne-Angle yokunyathela ye-phase-hybrid yokunyathela iimoto ngokubanzi yi-0.72 ° kunye ne-0.36 °. Kukho ezinye zeemoto ezihamba ngokusebenza okuphezulu ngokwahlulahlula inyathelo elingasemva ukuba libe lincinci. Umzekelo, inyathelo le-Angle yesigaba esimbini sokunyathela imoto eveliswe ngu-NEWKYE sinokumiselwa ku-1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 ° kunye no-0.036 ° ngokutshintsha ikhowudi, iyahambelana ne-Angle yesigaba sesibini kunye nesigaba ezintlanu se-hybridi yokunyathela imoto.
Ukuchaneka kolawulo lwe-ac servo motor kuqinisekiswe yikhowudi yokujikeleza emva komva kwesithuthi shaft. Ukuthatha i-NEWKYE epheleleyo yedijithali ye-AC servo motor njengomzekelo, kwimoto ene-standard standard ye-2500 encoder, ukubetha okulingana ne-360 ° / 8000 = 0.045 ° ngenxa yokusetyenziswa kwetekhnoloji yokuhamba rhoqo ngaphakathi komqhubi. Kwimoto ene-encoder eyi-17-bit, umqhubi ufumana i-131072 motors pulse kwithuba elinye, oko kukuthi, ukubetha kwayo kulingana ne-360 ° / 131072 = 0.0027466 °, eyi-1/655 yokulinganisa okulinganayo kwemoto yokunyathela nge-motor inyathelo Angle ka-1.8 °.
Okwesibini, iimpawu zamaza asezantsi azifani
Ngesantya esisezantsi, i-stepper motor ithambekele kukungcangcazela okuhamba rhoqo. Ukuhamba kwenyikima kunxulumene nemeko yomthwalo kunye nokusebenza komqhubi. Ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo ukuba isantya sokungcangcazela sisiqingatha sokungabikho komthwalo wokuhamba kwemoto. Isantya sokungcangcazela samaza asezantsi esimiselwe ngumgaqo osebenzayo we-stepper motor ayithandeki kwaphela ekusebenzeni kwesiqhelo komatshini. Xa isithuthi se-stepper sisebenza ngesantya esisezantsi, itekhnoloji yokuthambisa kufuneka isetyenziselwe ukoyisa imeko yokungcangcazela okuhamba rhoqo, njengokufaka isampulu kwimoto, okanye umqhubi ekusebenziseni itekhnoloji yokwahlulahlulahlulahlula.
Imoto ye-AC servo ihamba kakuhle kwaye ayingcangcazeli nakwizantya eziphantsi. Inkqubo ye-Ac servo enomsebenzi wokucinezelwa kwengxolo, inokugubungela ukungabikho kobungqingqwa boomatshini, kwaye le nkqubo inomsebenzi wohlalutyo lokuhamba rhoqo (i-FFT), inokufumana inqaku lokungcangcazela, kulula ukulungelelanisa inkqubo.
Okwesithathu, uphawu lwamaxesha okwahluka kwahlukile
Imveliso ye-torque ye-stepper motor iyancipha ngokwanda kwesantya, kwaye iya kwehla kakhulu kwisantya esiphezulu, ke isantya sayo sokusebenza ngokubanzi si-300 ~ 600RPM. I-Ac servo motor sisiphumo esikhutshiweyo rhoqo, oko kukuthi, inokuvelisa i-torque elinganisiweyo ngaphakathi kwesantya sayo esilinganisiweyo (ngokubanzi i-2000RPM okanye i-3000RPM), kunye nokuphuma kwamandla okusisigxina ngaphezulu kwesantya esilinganisiweyo.
Okwesine, umthwalo omkhulu kakhulu wahlukile
Isithuthi se-Stepper ngokubanzi asinakho ukulayisha ngaphezulu. Imoto ye-Ac servo inamandla amakhulu okugcwala. Ukuthatha iSanvo AC yenkqubo ye-servo njengomzekelo, inamandla okulayisha ngaphezulu kwesantya kunye nokulayisha ngaphezulu kwetorque. Eyona torque iphindwe kabini ukuya kathathu kwi-torque elinganisiweyo kwaye inokusetyenziselwa ukoyisa amandla e-inertial umthwalo ongafakwanga ekuqaleni. Ngenxa yokuba imoto ehambayo ingenawo umthwalo ogqithiseleyo, ukuze unqobe lo mzuzu we-inertia ekukhetheni, kudla ngokufuneka ukuba ukhethe imoto kunye ne-torque enkulu, kwaye umatshini akadingi i-torque enkulu ngexesha lokusebenza okuqhelekileyo, ngoko kwenzeka inkunkuma ye-torque.
Okwesihlanu, ukusebenza okungafaniyo kokusebenza
I-motor stepper ilawulwa ngolawulo oluvulekileyo. Ukuba amaza okuqala aphezulu kakhulu okanye umthwalo mkhulu kakhulu, kulula ukuphulukana nenyathelo okanye itafile; ukuba isantya siphezulu kakhulu, kulula ukugqithisa xa umisa. Ke ngoko, ukuze kuqinisekiswe ulawulo lokuchaneka, ingxaki yokunyuka kwesantya kunye nokuwa kwesantya kufuneka iphathwe kakuhle. Inkqubo ye-Ac servo drive yolawulo oluvaliweyo. Umqhubi unokuthoba ngokuthe ngqo imiqondiso yempendulo ye-encoder yemoto. Inxalenye engaphakathi iqulathe ring ring kunye nesantya ring.
Okwesithandathu, ukusebenza ngendlela eyahlukileyo kwesantya
Ithatha i-200 ~ 400 milliseconds kwimoto ehambahambayo ukukhawulezisa ukusuka ekuphumleni ukuya kwisantya sokusebenza (ngokubanzi amakhulu eenguqu ngomzuzu). Ukusebenza kokukhawulezisa inkqubo ye-AC servo kulungile. Ukuthatha i-NEWKYE 400W AC servo motor njengomzekelo, kuthatha kuphela i-milliseconds ezimbalwa ukukhawulezisa ukusuka ekuphumleni ukuya kwisantya esilinganisiweyo se-3000RPM, esinokusetyenziswa kwizihlandlo zolawulo ezifuna ukuqala ngokukhawuleza kunye nokuyeka.
Ukushwankathela, inkqubo ye-AC servo ingaphezulu kwesithuthi esinyukayo kwizinto ezininzi zokusebenza. Nangona kunjalo, i-stepper motor ihlala isetyenziselwa ukwenza imoto kwezinye iimeko ezingafunekiyo. Ke ngoko, kwinkqubo yoyilo yenkqubo yolawulo yokujonga iimfuno zolawulo, iindleko kunye nezinye izinto, khetha ulawulo olufanelekileyo lwemoto.
I-Hybrid Stepper Motor, I-220 Volt Ac Servo Motor, IServo Motor Actuator, Iimoto ezihamba ngentambo ezi-6, I-Ac Stepper Motor, Kuvalwe uMqhubi weSantya seMoto,